लुट्न सके लुटको फिडब्याक – Korea Pati
February 23, 2019 LeaveaComment on लुट्न सके लुटको फिडब्याक
सरकार भनेको जनताको आस, विश्वास कि त्रास ? लौन कोही छ यसो बुझाउनलाई ? बुझ्नै गाह्रो भयो हामी जस्ता सामान्य जनतालाई । अब त गुन्डा, दादासँग मात्र डराउने समय त सक्किएछ । अझ त्यसमाथि सरकार र सरकारी निकायसँग जोडिएकाहरूसँग डराएर बस्ने समय पो आयो त ? प्रजातन्त्र, गणतन्त्र भनेको यस्तो पो हुँदो रहेछ ? हरेक कुरामा बन्देज ? बल्ल सिक्न थालिँदै छ….। पहिलेको समय पनि यस्तै थियो र ? कि कसो हो ?